Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Jiona 2019 à 08:11
30 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 23 Aprily 2019 à 16:27 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Jiona 2019 à 08:11 (hanova) (esory)
Ny '''tetiandro samaritana''' dia [[tetiandro]] ampiasain'ny vahoaka atao hoe [[Samaritana]]. Ny Samaritana dia milaza ny tenany ho taranaka ny Istaelita izay nonina tao amin'ny [[Fanjakan'i Israely (Samaria)|Fanjakan'i Israely avaratra]] izay resahina ao amin'ny [[Baiboly]]. Nisaraka tamin'ireo [[Jiosy]] izy ireo tamin'ny taonarivo voalohany tal. J.K. Mampiasa ny [[Pentateoka]] (boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly) izy ireo, nefa ny fivavahana arahiny dia manana ny mampiavaka azy amin'ny [[jodaisma]], ka isan'izany ny tetiandro ampiasain'izy ireo izay tsy mitovy amin'ny [[Tetiandro hebreo|tetiandro jiosy]].
Tetiandro [[Tetiandro manara-bolana sy masoandro|manara-bolana sy masoandro]] ny tetiandro samaritana ka sahalahala amin'ny [[tetiandro hebreo]] ka ahitana [[taona]] manara-masoandro sy [[Volana (fotoana)|volana]] manara-bolana ary [[herinandro]] misy fito [[andro]] (izay manomboka amin'ny [[Alahady]]).
Tsy toy ny tetiandro jiosy ny tetiandro samaritana ka tsy manome anarana ireo volana ao amin'ny taona fa ny laharany fotsiny, izay manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 12 (na 13 arakaraka ny taona). Ny anaram-bolana jiosy mantsy dia avy amin'ny anaram-bolana asiro-babiloniana izay azon'izy ireo nandritra ny [[Fahababoana tany Babilona|fahababoanna tany Babilona]] izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-6 tal. J.K. Ny Samaritana, izay tsy tratran'io fahababoana io, dia tsy nandray ny anaram-bolana assiroasiro-babiloniana satria miorina amin'izay voasoratra ao amin'ny [[Pentateoka]], izay manonona ny volana amin'ny laharany (volana voalohany, volana faharoa, volana fahatelo, sns) fa tsy manome anarana azy ireo.
Ny taona manara-bolana ahitana roa ambin'ny folo volana dia misy 354,35 andro (12 × 29,53 andro) izay tsy inona fa ny fihodinan'ny [[Tany]] amin'ny [[Masoandro]]. Latsaka 10,89 andro (365,25 – 354,36) isan-taona izany ny taona samarianasamaritana raha mitaha amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro ka tokony ho fenoina izany amin'ny maha manara-bolana sy masoandro ny tetiandro samaritana.
Mandritra ny tsingerin'i Metona dia maharitra 13 volana ny 7 taona isanisany. Ao amin'ny tetiandro hebreo, ireo taona ireo dia ny taona faha-3, faha-6, faha-8, fah-11, faha-14, faha-17 ary faha-19 ao amin'ilay tsingerina, ny taona sisa dia taona tsotra ahitana 12 volana. Ao amin'ny tetiandro samaritana kosa dia tsy miseho amin'ny elanelam-potoana mitovy ny 7 taona fa raiketina amin'ny alalan'ny kajy miafina izay ataon'ireo mpitarika ny fivavahana samaritana. Araka ny lovatsofinalovantsofina samaritana dia i [[Adama (Baiboly)|Adama]] no nampianarina an'io kajy io, izay atao hoe ''Ishban Kashta'' (izay midika hoe "tena kajy").
Ny Sabata dia mifanandrify amin'ny andro Asabotsy, ka mitovy amin'ny [[Sabata (jiosy)|Sabata jiosy]] izany. Ao amin'ny tetiandro jiosy dia tsy afaka milatsaka amin'ny andro mialoha ny Sabata na ny andro manaraka ny Sabata ny fankalazana ny ''Yom Kippur'' na ny fankalazana ny ''Sukkot''. Noho izany dia ampiana andro iray na maro ny volana ''Kislev'' mba hialana amin'izany. Ao amin'ny tetiandro samaritana kosa dia tsy misy ny fanovana fa azo ankalazaina iray andro na marpmaromaromaro mialoha na manaraka ny Sabata ireo fety ireo.
Araka ny lovantsofina, ny tetiandro samaritana dia efa hatramin'ny nodian'ny vahoakan'i Israely tao amin'ny tany masina nefa ny tetiandro hebrephebreo jiosy dia nanomboka tamin'ny taona voaoohanvoalohan'ny [[Famoronana (finoana sy fedrà)|famoronana]] ka ny taona 3641 ao amin'ny tetiandro samaritana, ohatra, dia taona 5763 ao amin'ny tetiandro jiosy sady taona 2002-2003 ao amin'ny tetiandro sivily.
Maro ny fety jiosy tsy ankalazain'ny Samaritana, dia ireo fety tsy andidian'ny Pentateoka. Ny fety samaritana lehibe ndrindrindraindrindra dia ny fetin'ny Paska. Tsy mitovy amin'ny Jiosy izay tsy manatanteraka intsony ny soron'ny zanakondrin'ny Paska ny Samaritana fa mbola manao izany iray andro ialohamialoha ny Paska eo amin'ny tendtombohitratendrombohitra [[Gerizima]].
Tsy ny PaslaPaska ihany anefa no fety ankalazain'ny Samaritana fa ao koa ny mpanao [[fivahiniana masina]] israelita-samaritana izay mitsidika in-telointelo isan-taona ny toerana masina eo amin'ny tendrombohitra Garizima. Ny andro fahafito amin'ny Paska izay atao hoe "fetin'ny mofo tsy misy masirasira", fa tsy שבועות / ''Shavouot'' (izany hoe ny Pentekosta) sy ny andro voalohany amin'ny fetin'ny tabernakely (''Sukkot''). Ireo fivahiniana masina telo ireo dia mifandray hentitra amin'ny fety telo lehibe jiosy, dia ireo ''Sheloshet Haregalim.''
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/971250"